Lo mbiko, onikeza iphrojekthi An yamila sokuzibonakalisa elungile, kanye ithuba ukuhlola ngokugcwele izinqumo ezithathwe futhi kuhlelwe imisebenzi njengoba esebenza kahle kakhulu futhi ikuvumela ukuba uphendule kahle umbuzo ukuthi iphrojekthi kuwufanele investimenti lemali, - plan ukukhiqizwa. cishe zonke isenzo ezokwenza okudingekayo ngenkathi kusethwa ukukhiqizwa kufanele kumele iboniswe nokuqhuba ibhizinisi.
Okokuqala, kudingeka sibonise ukuthi isevisi noma umkhiqizo nakanjani ukuthola umthengi ukubala umthamo wemakethe yokuthengisa ukwenza kube lwentfutfuko ethembisa. Okwesibili, kubalulekile ukulinganisa ngokunembile izindleko ukuthi kuzodingeka enkulu ekwakhekeni nokumaketha imikhiqizo noma amasevisi noma imisebenzi emakethe. Okwesithathu, kudingeka sithole inzuzo ukukhiqizwa esikhathini esizayo, ekuboniseni konke ukusebenza yayo the zimali (ibhizinisi), lwesabelo isimo, zezifunda kanye lendawo. Kulesi usomabhizinisi kusiza uhlelo zokukhiqiza. Uhlelo lwebhizinisi inikeza, kanye nokwenza imisebenzi yayo eziyisisekelo.
1. Kufanele kube ithuluzi lapho usomabhizinisi ihlola ukusebenza langempela kwenkathi ethile ukusebenza.
2. Kutfutfukiswa ethembisa umqondo ibhizinisi futhi esetshenziswa uhlelo zokukhiqiza. Uhlelo lwebhizinisi inawo wonke amathuluzi ukuheha utshalomali.
3. Isu Inkampani nalo isetjenziswa ngosizo yayo.
Ngo inqubo uhlela yisigaba esibaluleke kakhulu - plan ukukhiqizwa. Uhlelo lwebhizinisi kufanele kube ukuphela kwento umuntu okudingeka ukuhlela ngaphakathi liqinile, futhi ukusekela kwamabhizinisi uxhaso ezivela emithonjeni yangaphandle, okungukuthi, ukuthola imali yephrojekthi ethize - kuyinto loans yasebhange, ngokwabiwa kwemali, nokulingana nezinqubo zemininingwane yezinye izinkampani umsebenzi.
Ngakho-ke kudingekile ukuba kubonise zonke izici imisebenzi commercial nezezimboni futhi imiphumela zezimali wenkampani. Isakhiwo le dokhumenti kungaphansi zokuhlanganisa namazinga enikezela kwepulani ukukhiqizwa. Uhlelo lwebhizinisi (isibonelo kuboniswa ngezansi) kufanele ibe nesigaba esithile. Ngokucaca, sithatha isampula ejwayelekile.
Eyokuqala kwesigaba - siwubheke kafushane. Loku ukufingqwa okungafundwa. Kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba isifinyezo ifomu ibonisa umnyombo wale phrojekthi. Cishe bonke impumelelo kuncike okuqukethwe kwesigaba sokuqala, ngalokho ncamashi plan ukukhiqizwa nokuqhuba ibhizinisi. Isibonelo-non-nokubambisana emuva kokuhlangana nezikhulu osomabhizinisi uqhube kungaholela kude ezingaphezu kweyodwa. Isigaba sokuqala ukuvusa isithakazelo inkampani abangafaka imali emabhizinisini abo.
Kafushane, qiniseka izinto ezilandelayo kukhona ukuboniswa. Okokuqala - injongo yephrojekthi incazelo emfushane inkampani. Khona-ke, e-isifinyezo esifanayo lapho ukhuluma ngezici ezikhanga kakhulu futhi ezicini ezinhle umqondo ibhizinisi, okuyinto inikezwa (omunye kudingeka ukhethe wonke amaqiniso kuzo zonke ezinye izingxenye, kwebhizinisi plan ye ibhizinisi zezimboni njalo wenza kanjalo). Ngokulandelayo, ukhombise ivolumu bakhangwa credit izinsiza kanye nokutshalwa nezinkomba ezinkulu zezimali ezingaba elichaza ukusebenza kwale phrojekthi. Qiniseka ukuthi ucacise olulindelekile Uhlaka isikhathi ukubuya izimali ezibolekwe. Bala usuku kanye nenani izitifiketi wathola futhi amaphathenti. isifinyezo Qedela amaqiniso kunconywa ukuqinisekisa iziqinisekiso kwezomnotho kanye lomthetho futhi lithembekile umsebenzi inkampani esizayo.
Ingxenye yesibili Sizokwenza incazelo eningiliziwe leli bhizinisi ezihlongozwayo. Lokhu akulona kwesigaba ukukhiqizwa uhlelo lwebhizinisi, kodwa izinto eziningi ezikhona ifomu onomfutho wathutha lapha - babonakala landulele kancane kancane ukwembuleka ukukhanga into.
1. Umlando wakhe omfushane: amasevisi, noma ukuhweba noma ukukhiqizwa, ubunjalo inkampani nezinhlobo zalo eziyinhloko womsebenzi.
2. Zamabhizinisi komqondo nezinga lokukhula kwengane yayo.
3. Inhloso inkampani, zonke izinkambiso yayo lwenhlangano zomthetho.
4. Iziphakamiso lapho inkampani kuyofika kumakhasimende ayo.
5. Uma inhlangano selivele likhona, kubalulekile ukwethula zonke izinkomba ezinkulu kwezomnotho kanye lobuchwepheshe esikhathini esidlule esidlule 5 iminyaka.
6. yanamuhla imingcele kwendawo nemisebenzi esikhathini esizayo.
7. eningiliziwe sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe izinkomba ukukhanyisa: wonke amasevisi, izimpahla amabhizinisi ezifana ezikhathini ezithile kanye nezimakethe.
8. Chaza umehluko phakathi kwamabhizinisi kusukela lonke iphrofayli.
Esigabeni wesithathu kwebhizinisi plan ye umsebenzi zokukhiqiza kuhlanganisa incazelo eningiliziwe ngokomzimba amasevisi noma imikhiqizo amathuba ukusetshenziswa kwazo. Kufanele ucacise konke izinhlangothi ezikhanga kakhulu imikhiqizo kanye namasevisi siyonikwa ukuhlonza degree of eseyintsha.
Kubalulekile ibonisa degree of ukulungela amasevisi ehlongozwayo noma imikhiqizo bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla (lapha kuyoba ulwazi olufanele kakhulu kulabo abathengi noma ochwepheshe abajwayele imikhiqizo mase ukubuyekeza evumayo ezabhalwa ngayo).
Esigabeni sesine yokukhiqiza ibhizinisi project uhlelo kuzomele sifake analysis eningiliziwe emakethe, futhi kudingeka wenze uhlaka ukumaketha isu lalo. Inhloso yalesi ukuhlaziywa ukuchaza kanjani ikusasa ibhizinisi kulapho ezosebenza emakethe ekhona, kanjani bayosabela kanjani lapho isimo ukuthi kolweni kukhona yokuthengisa umkhiqizo noma amasevisi zanikezwa. Lena ngokuyinhloko kwencazelo umthamo uphoqe, umncintiswano ukuhlaziywa, futhi eziningi nezinye izinto ithonya. Ngenxa yalokho, yemakethe kumele inikezwe izibikezelo ekuthengisweni amavolumu. Kuyafaneleka zonke ohlobene yokuthengisa ukukhuthazwa, zamanani, umkhiqizo ukukhuthazwa, okungukuthi, wonke ukumaketha isu, kuhlanganise ukukhangisa.
Isu ukumaketha siqukethe izingxenye eziningi. Lokhu kuwumphumela emakethe izingxenye futhi ubuchwepheshe obusha, zamanani isu imikhiqizo namasevisi inkampani kanye intengo izibikezelo, Ukusabalala emakethe, ukuthuthukiswa ububanzi, umthombo isu, ukukhetha kwesokudla izindlela kanye nezindlela ukusatshalaliswa umkhiqizo ukuze sikhuthaze marketing yayo, ukukhangisa isu namathemba yentuthuko ibhizinisi.
I ukukhiqizwa ibhizinisi project uhlelo - ingxenye enkulu yalo. Buqala iqhinga ukukhiqizwa (business plan) kanye ezivamile indlela kwinhlangano zokukhiqiza: kuyadingeka ukuze ucacise ukuthi yikuphi izinto zokusetshenziswa futhi kubalulekile lapho imithombo yabo futhi yiziphi izimo ukunikezela. Okulandelayo: ukuchaza izinqubo of wonke umkhiqizo kanye nezinto ezidingekayo futhi umthamo ukuqokwa uhlu Manpower futhi zonke izidingo kulokhu (i nabaqashwa, onjiniyela kanye nochwepheshe, ukukhiqiza), okubonisa izimo hhayi kuphela ukusebenza, kodwa futhi isakhiwo kanye nendlela okwakheke ngayo neminyango, kufakwe hlangana ukubandulwa futhi kulindeleke izinguquko ekukhuleni wenkampani.
Ngokwe-update imikhiqizo futhi kufanele kuhlelwe nge incazelo izindlela zesayensi, izimiso, izinhlelo, izindlela, ubuchwepheshe, substantiation amaphrojekthi utshalomali ngohlangothi lobuchwepheshe kanye nezomnotho, izinkomba sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe, umthombo umfutho kanye izinga imikhiqizo izimbangi 'futhi ibhizinisi. Kumele kube nohlelo locwaningo (imisebenzi yocwaningo kanye nentuthuko).
Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwebhizinisi ye ukukhiqizwa yezimboni kuzomele sifake section elalinikezelwe ukuthengiswa kwemikhiqizo. Qiniseka ukuba baphakamise imibuzo efana:
1. Izibalo zokukhiqiza nomthamo yonke iminyango ibhizinisi.
2. amasheduli loMsebenzi umkhiqizo yokuthengisa.
3. Uhlaziyo oluningiliziwe wekhono ukusetshenziswa.
Isigaba ukukhiqizwa uhlelo lwebhizinisi kufanele ifake izigaba ezingeni lobuchwepheshe ibhizinisi kanye ukukhuthazwa yayo, ezingeni yenhlangano ekukhiqizeni, ukuthuthukiswa kohlelo collective kwezenhlalo, uhlu izinyathelo ozikhethela ku nokuvikelwa kwemvelo. Futhi ekugcineni - amaphrojekthi investimenti ukuthuthukiswa ukukhiqiza. Ngu enamathiselwe umsebenzi schedule nge uhlu izigaba eziyinhloko ngale phrojekthi ehlongozwayo, ngokuxhasa izidingo nokusetshenziswa (igxathu negxathu), ibonisa lohleliwe isikhathi Uhlaka lomsebenzi kuzo zonke izigaba.
In the plan ukuhlela yokukhiqiza lebhizinisi elifakiwe esigabeni lapho esebenzelana nama-ukukhiqizwa software, nge ukuhlaziywa nekusebenta ekusetshenzisweni futhi ukubala e zazo baba nezidingo ezithile. Ngokuya impahla kanye lobuchwepheshe Imininingwane ukwesekwa kwamabhizinisi nokusekela zokulawula kanye methodological semisebenzi kumelwe futhi izigaba ezifanele.
Isigaba lesikhombisa business plan ihlanganisa incazelo noma luhle incazelo emfushane abahlanganyeli eyinhloko leli bhizinisi okuhleliwe. Kuyinto usomabhizinisi futhi abangane bakhe, zimali, ibhodi yabaqondisi nabasebenzi abasezikhundleni ukhiye. Kufanele kube idayagramu lenhlangano nge uxhumano yangaphakathi kanye umthwalo ukwabelana, ukuze eziqokiwe Ukukhetha kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzi, kanye umholo wabo.
I kohlelo lwebhizinisi kuhlanganisa ezindabeni ezibalulekile njengoba ukuthuthukiswa, ukubambisana kanye nokuvunywa izinhlelo ngokuba ukuqaliswa izinhlelo zamasu. Kufanele ihlelwe zokubala ukulawula ukuqala kokusetshenziswa kwezinhlelo, kanye nezizathu uhlelo yayiyingxenye yokuphila ngokucacile ngendlela esifike ngesikhathi, ngaphandle kokulahlekelwa izinga edingekayo futhi ngaphandle izindleko okwandisa. Inqubo kohlelo ibhizinisi kumele kushintshwe uma kuyoba izinguquko esimweni sangaphakathi noma wangaphandle ukukhiqizwa entsha.
Isigaba lwesishiyagalombili, wavumelana mathiriyeli uhlelo lwebhizinisi esethulwa kuzo zonke ezinye izingxenye ke, ne isifinyezo kanye nokunikeza ukubaluleka nkulumo kwesigaba ngasinye - lwezezimali, futhi ngoba vula yokuthengisa amavolumu sezulu engenayo kanye nezindleko ukulinganisela Ngokwamanani emali, uhlelo lokusebenzisa imali futhi ibhizinisi esele umhlahlo.
Ngaphezu kwalokho, esigabeni zezimali isabelomali yokusebenza lenkampani, abaphathi bayo izingozi umshwalense, isibikezelo ukuthenga okuthile okufaka izibambiso ohlwini nemingcele eziyisisekelo yephrojekthi ukusebenza yayo kuhanjiswe, futhi le nkathi payback net iholo samanje futhi isilinganiso sangaphakathi senzuzo , kanye nokwenza inzuzo.
Isigaba lesishiyagalolunye Sizokwenza engozini ukuhlolwa, kungenzeka kakhulu iphrojekthi, futhi, mhlawumbe, isibikezelo esinembile kulezi izingozi kungaholela esimweni we majeure amandla.
Kube kufanele waphendula ukunciphisa izingozi futhi ukulahlekelwa engaba ngenxa kubo. Ngokuvamile, business plan zihlukaniswe izingxenye ezimbili: eyokuqala uchaza izinyathelo zenhlangano ukuvimbela noma yimuphi izingozi, njengoba kubekiwe yesibili self-umshwalense noma uhlelo zangaphandle.
Kukhona izibonelo ekulungiseleleni business plan nge izigaba okuthuthukile futhi ezengeziwe lwesishiyagalombili lesishiyagalolunye kuya kweleshumi. Isihlobo ukuze icebo zezimali , ungasho ukuthi nje kancane ukunwetshwa. Kukhona elotshiwe nyangazonke, ngonyangantathu, futhi kwaphela unyaka yoshintsho dollar ngokumelene ruble ngamunye, futhi kunikezwa uhlu entela, usinikeza ruble kwamandla emali. Umniningwane kunikezwa mayelana ukwakheka dolobha ngezithukuthuku ukubolekisa, isabelo nezindaba noma izimali siqu, kanye nenqubo lokukhokha imali kanye isithakazelo kubo.
Isigaba wezimali ka imibhalo ezintathu eziyinhloko: i-nenzuzo nokulahlekelwa akhawunti (imisebenzi yokusebenza wenkampani ngoba kwenkathi ngayinye), plan ezezimali we ezinyakazayo kanye balance sheet of nesimo esingokwezimali inkampani okwamanje. Attached: perdpolagaemye ukubuyiswa kwemali schedule nge ukukhokha inzalo, ulwazi eveza nekucabangela abuye izinguquko kokusebenza kanye nokukhokhwa kwezintela nezimali. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile ukwenza izibalo izinkomba solvency, zezimali kanye ukusebenza Kulindeleke yephrojekthi.
Veterinaries "Alternative" (Samara). Usizo lwabenza imisenenzi Dr. Dolittle izilwane zakho